Ukufaneleka - Inc Incible Mag
Isingeniso Ku-Muay Thai Course Course In
Lapho abantu bekhuluma ngokuqeqeshwa, imvamisa bacabanga ngomsebenzi omkhulu kakhulu womzimba oholwa ochwepheshe abenziwa ngabadlali abangochwepheshe. Kodwa-ke, esikhathini samanje bayanda abantu abanentshisekelo ezinhlotsheni ezahlukene zokuqeqeshwa ngoba sebebonile ukuthi umsebenzi ohlelekile…
I-Muay Thai Nezinzuzo
Impilo ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu empilweni yethu noma ngabe sineminyaka engu-7 noma engama-77 ubudala. Yingakho ngamunye wethu kufanele anakekele impilo yakhe ngokukhethekile. Kunesizathu sokuthi kungani abantu kusukela ezikhathini zasendulo babenenqwaba…
Izivivinyo Ezi-3 Zekhefu Lesidlo Ongazizama Phakathi Kokusebenza Ekhaya Ukuze Uzigcine Unempilo
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ukusebenza ekhaya bekunzima kithina sonke. Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuthi sizijwayeze phakathi nobhadane lweCoronavirus oluthinte cishe zonke izindlela zokuphila zawo wonke umuntu. Esikhundleni sokuvuka ekuseni ukuze uthathe...
Izinhlelo zokusebenza Ezingcono Kakhulu Zezempilo Zokuzivocavoca
Akukaze kube lula ukulandelela ukufaneleka kwakho futhi ufinyelele imigomo yakho ngokusebenzisa izindawo zokuzivocavoca, abaqeqeshi bomuntu siqu nezinhlelo zokusebenza. Izinhlelo zokusebenza kungenzeka zibe inketho elula neshibhe kakhulu ongayengeza esimisweni sakho, futhi ngokuthuthukiswa kwakamuva kohlelo lokusebenza, ungafaka...
ISuwit Muay Thai Yokuqina EThailand Ingabe Ukuzivocavoca Okuhle kakhulu
Sekuyiminyaka abantu bezama ukwehlisa isisindo, futhi izindlela eziningi ezahlukahlukene zisetshenzisiwe. Eminye yayo bekuyinkambiso iminyaka eminingi, futhi noma abantu bekholelwa kuyo, bathole imiphumela enguziro. Ukudla sekuyithathile imboni, kepha uma…
Izinkinga Zezinyawo Nokunakekelwa - Okufanele Ukwazi
Izinkinga zezinyawo zivame ukuba nesixazululo sokuthuthukisa, kungakhathaliseki ubudala okufanele zelashwe. Ukungaguquguquki ekwelashweni kubonakala emiphumeleni yakhona. U-Gordon Slater ungudokotela ohlinzayo wamathambo oqeqeshiwe ogxile ekuhlinzeni unyawo, ikakhulukazi ekwelapheni ama-bunion. Lapha…
Yini Ekhetheke Kangaka Ngama-SARM?
Ama-SARM noma ama-Selective Androgen Receptor Modulators yizidakamizwa ezithuthukisa ukusebenza ezingezinye zezimfihlo ezigcinwe kahle zeGym Bodybuilding in this day and age. Zifana kakhulu ne-steroids kodwa ngaphandle kwemiphumela emibi emathanjeni nasemisipha okwenze kwaba…
Yiziphi Izinto Ezinhle Zokusebenzisa Ubisi Lenkomo Olungokwemvelo
Ubisi lwezinkomo eziphilayo lunempilo kunobisi olujwayelekile. Iqukethe inani eliphakeme lama-omega 3 fatty acids, i-CLA, nama-antioxidants. Ukukhula okunempilo nentuthuko, ubisi lubhekwa njengengxenye ebaluleke kakhulu ekudleni komuntu. Ngokuya ngemininingwane yakamuva, i-organic…
Izinyathelo ezi-4 zokuzuza umphumela wokujima osheshayo
Ukusebenza sekube kukhulu ngendlela emangalisayo njengomkhakha webhizinisi kule minyaka embalwa edlule. Kuye kwashiwo ukuthi abantu abangaphezu kuka-20% emhlabeni basebenza kanjani njalo (cishe nsuku zonke). Uma kuqhathaniswa no-2016, lokhu kube ingqikithi…
Ukuzivocavoca Ukushintsha Umzimba Wakho
Umzimba womuntu unekhono elimangalisayo lokuzivumelanisa nezinhlobo eziningi zokuxineka. Ngemuva kwakho konke, lezi zinguquko yizo ezenza sikwazi ukuthola amandla, sakhe ukubekezela, futhi sinciphise isisindo! Ngalokho kushiwo, ukwenza imizila efanayo kaninginingi…